Dhaarinta xildhibaanada Baarlamaanka Labaad ee Jabbaland oo hadda socota – GEELLE MAG
Cali Axmed Posted On August 13, 2019
Waxaa hadda si habsami leh magaalada Kismaayo uga socota xafladda dhaarinta baarlamaanka 2-aad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland.
Munaasabadda waxaa gobjoog ka ah xildhibaanno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo Madaxda Jubbaland. Munaasabadan lagu dhaarinayo Xildhibaanada cusub Baarlamaanka Labaad ee Jubbaland ayaa hada ka socota magaalada Kismaayo, iyadoo xubnaha la dhaarinayo ay yihiin 73-da Xildhibaan ee xalay shaaciyeen Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubbaland.
Xildhibaanada ayaa loo dhaarinayaa si koox koox ah, iyadoo lagu diyaarin doono sidii caadada eheed kitaabka qur’aanka Kariimka ah.
Xildhibaannada Cusub ee Baarlamanka Jubbaland ayaa waxaa goobta ku dhaariyay Guddoomiyaha Maxakamadda Sare Ee Jubbaland,sida uu sheegay Xildhibaan Xasan Cabdi oo ka mid ah Golaha Shacabka goobjoogna ka ahaa munaasabada dhaarinta.
Dhaarintan ayaa ka dhigan tallaabada koowaad ee loo qaaday dhisidda maamul cusub oo uu horkacayyo Baarlamaanka Jubbaland oo wixii hadda ka bilowda guda geli doona doorashada Guddoonka cusub iyo tan Madaxweynaha Jubbaland ee dhowaan la qaban doono.
Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in xulista baarlamaanka 2-aad ee Jubbaland ay qeyb ka ahaayeen dhammaan odayaasha dhaqanka ee Jubbaland.
Kadib markii ay iska soo daba baxeen wareegtooyin lagu kala magacaabayo xildhibaano labo dhinac ah oo kala matalaya labada dhinac oo ku is haaya siyaasadda Maamul Goboleedka Jubbaland.
Balse illaa iyo hadda lama oga meesha ay ku dambeyn doonto xaaladda Dowlad Goboleedka Jubbaland, Laakiin waxaan ka dhur sugeynaa sida ay noqoto xaaladda.
Shil gaari ah ayaa goor dhoweyd ka dhacay Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir